မ င်္ဂ လာ ပါ မိတ် ဆွေ များ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » မ င်္ဂ လာ ပါ မိတ် ဆွေ များ။	19
မ င်္ဂ လာ ပါ မိတ် ဆွေ များ။
Posted by ဦး လေး မန်း on Aug 29, 2016 in My Dear Diary | 19 comments
ယ နေ`့ကြွ လာ မိတ် သ ဟာ
ချမ်း သာ ကိုယ် စိတ် မြဲ ပါ စေ။
ငယ် ငယ် တုံး က ရုပ် ရှင် သွား ကြည့် ရင် တွေ`့ ရ တဲ့ စာ သား လေး နဲ`့နုတ် ဆက် ပ ရ စေ။
မန်း ဂ ဇက် ကို နှစ် ပေါင်း များ စွာ အား ပေး လာ တာ ပါ။ မင် ဘာ ဝင် ထား ပေ မဲ့ တ ခါ မှ ဝင် မ ရေး ဘူး ပါ။ အ ခု တော့ ကွန် မန်`့ လေး တွေ ဖတ် ရင်း တ ခါ တ လေ ဝင် ရေး ချင် စိတ် ပေါ် လာ လို`့စ တင် မိတ် ဆက် တာ ပါ။
အား လုံး မ င်္ဂ လာ ပါ။
ဦး လေး မန်း has written 1 post in this Website..
View all posts by ဦး လေး မန်း →	Blog
Thint Aye Yeik says: မင်္ဂလာပါ ဦးလေးမန်း။
စာတွေလည်း ရေး တင်ပါ…ဖတ်ဖို့ အသင့်ပါ။
ခင်ခ says: ရေးပါဗျာ ဖတ်စရာ မှတ်စရာ တွေတိုးတာပေါ့ ကြိုဆိုပါတယ် ဦးလေးမန်းရေ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: မှန်းကြည့်ရတာ ရှေ့မီနောက်မီ လူကြီးပိုင်းကနဲ့ တူပါတယ်။ မန်းဒလေးဂဇက်မှ ကြိုဆိုပါတယ်။
kai says: မင်္ဂလာပါ..။
ဦး လေး မန်း says: ကြို ဆိုကြ သော မိတ် ဆွေ များ အား လုံး ကို ကျေး ကျေး ပါ။
လော လော ဆယ် တော`့ စါ ရိုက် လေ့ ကျင့် နေ ပါ တယ်။
ဖိုးသာထူး says: ရုပ်ရှင်ရုံတိုင်း အဲ့ဒီစာသားလေးများထိုးတတ်လားမသိ ။
ကျနော်သိတဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံတစ်ခုကတော့ ပိတ်ကားအပေါ်ကနှဖူးစီးမှာ ရေးထားတာဗျို့။
ဦး လေး မန်း says: ဖိုး သာ ထူး ရေ အ ရင် တုန်း က ရုပ် ရှင် ပြ ခါ နီး ဆ လိုက် နဲ့ ပြ တာ ပါ ။ ခု ပြ သေး လား တော့ မ သိ ဘူး။ ရုပ် ရှင် ရုံ မ ရောက် တာ လဲ ဆယ် စု နှစ် တ ခု တော့ ရှိ ပြီ ထင် တာ ဘဲ။
ကထူးဆန်း says: မင်္ဂလာ ပါ ဦးလေးးး…
ဦးလေးမန်းဆို တာလေးရှင်းပြပါလား ဟင် င် .. ဟို ဦးလေး ကြီး နဲ့ မှားမှာ စိုးလို့ … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14449
kai says: ကြည့်ရတာသူကိုယ်တိုင်ပဲနဲ့တူဒယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7
ဦး လေး မန်း says: သူ ကြီး ရေ တ ဦး စီ ပါ ခင် ဗျ။ ကျွန် တော် က အ သစ် က လေး ပါ။
ဦး လေး မန်း says: က ထူး ဆန်း ရေ ဦး လေး ကြီး နဲ့ မ တူ ပါ။ မန်း အ ခေါ် တော့ မန်း က ဦး လေး ပေါ့ လေး ပေါက် လို ပေါ့။ အ သက် မ ငယ် တော့ လို့ ဦး တတ် လိုက် တော့ ဦး လေး မန်း ပေါ့ ခင် ဗျာ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အန်ကယ်ဂျီးနဲ့မှားမှာစိုးလို့ပါ
Ma Ei says: မင်္ဂလာပါရှင့်
စာဖတ်ရာကနေ ကွန်မန့်ပေး နောက်ထပ်တော့ ပိုစ့်တင်ပြီးစာရေးပါလို့ အားပေးပါရစေ
kotun winlatt says: မန္တလေးမြို့ကိုရောက်ရင် တွေ့ပြီး ဆုံပြီး စကားပြောဖော်တစ်ယောက်တိုးလာပြီပေါ့
မင်္ဂလာပါ ဦးလေးမန်း ခင်ဗျားးးးးး
uncle gyi says: ကြိုဆိုပါတယ်ကိုမန်းရေ
ဦး လေး မန်း says: ကို ပေါက်. မ အိ . ကို ထွန်း ၀င်း လတ် . အန် ကယ် ကြီး .
Comment တွေ အ တွက် ကျေး ဇူး ပါ။ ခင် ဗျား တို့ စာ တွေ ဖတ် ပြီး အား လုံး ကို ကိုယ့် ဖါ သာ ရင်း နှီး နေ တာ ပါ။ လော လော ဆယ် လဲ မန်း မှာ မ ရှိ ပါ ခင် ဗျာ။
အန် ကယ် ကြီး ရေ မှန် ပါ တယ် ၅၀ မ က ပင် စင် စား အ ရွယ် ပေါ့ အ လုပ် လုပ် တုန်း ပါ။
ကိုယ့် ဖါ သာ ရင်း နှီး နေ တာ မန်း ဂ ဇက် တ ဖွဲ့ လုံး ကို ပါ။
A mar nyo says: မင်္ဂလာပါ ဦးလေးမန်း
ဦးကြောင်ကြီး says: အူးမန်းမှာ သာမီးရှိမှာပေါ့ညှော်…
ဦး လေး မန်း says: အ မာ ညို ရေ ကျေး ဇူး ပါ။
ကို ကြောင် မ အ ဘူး များ မှတ် နေ လား တ ကိုယ် တည်း လို့ Declare လုပ် လိုက် မယ်။